नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा पाइलट दीपु ज्वारचन नियुक्त, काे हुन् उनी ? | Kathmandu Pati Kathmandu Pati
नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा पाइलट दीपु ज्वारचन नियुक्त, काे हुन् उनी ?
प्रकाशित मिति : २०७९, ९ असार बिहीबार १४:३७
काठमाण्डु – सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रवन्धकमा दिपु ज्वारचनलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदकाे बिहीबारकाे निर्णयअनुसार रिक्त महाप्रबन्धक पदमा नेपाल एयरलाइन्सका विमान चालक ३५ वर्षिय ज्वारचनलाई नियुक्त गरिएको हो ।
२२ असोज २०७७ मा महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएका डिमप्रसाद पौडेललाई २३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पदमुक्त गरेपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
को हुन उनी ?
मुस्ताङ घर भएका दीपु ज्वारचन १५ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमको टुइनअटर विमानका लागि कोपाइलटका रुपमा हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । उनी समाजशास्त्रका स्नातकोत्तर हुन् । उनले ०७६ असारदेखि ०७८ फागुनसम्म निगमको पाइलट तथा क्याबिन क्रू विभागका निर्देशक भएर काम गरे ।
७ हजार घण्टा जहाज उडाएको अनुभव बटुलेका उनले कोभिड माहामारी सुरु भएपछि चीनको बुहानलगायत खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा निगमको वाइडबडी जहाज अस्ट्रेलिया पहिलोपटक उडेको थियो ।
महाप्रवन्धकमा नियुक्त भएका ज्वारचल यसअघि वायु सेवा निगमकै अपरेशन विभागको प्रमुख समेत थिए । हवाई क्षेत्रका जानकार समेत रहेका ज्वारचन नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारको लागि बनेको कार्यदलमा समेत सक्रिय रहेर काम गेका थिए ।
सरकारले पहिलोपटक नेपाल एयरलाइन्सकै पाइलटलाई निगमको महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरेको हो । ज्वारचनका बुबा पनि निगममै वाइडबडी विमानका पाइलट हुन् भने उनकी आमा पनि निगमको क्याबिन क्रू विभागकी प्रमुख हुन् ।
प्रहरीलाई सफलता : किड्न्याप भएका ३ वर्षीय बालक सकुशल उद्धार